औषधीको भण्डार डल्ले खुर्सानीका यस्ता छन् अचुक फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
डल्ले खुर्सानी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरको भान्सामा हुने गर्दछ । खुर्सानि सानो बोटमा फल्ने गर्दछ । यसको सेवन गर्दा धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसको सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई हुने फाइदा यसप्रकार छन् । खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ ।
डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जसता रोगको औषधी समेत हुन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पु¥याउछ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ ।
त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीका निम्न फाइदाहरु रहेका छन् । यसको नियमित सेवन गर्दा मोटोपन घटाउछ । रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । डल्ले खुर्सानिले सवैभन्दा पिसावको विरामीलाई लाभदायक छ । यसले हाडजोर्नी लगाएतका दुखाइका बिरामिलाई पनि निकै फाइदा पुर्याउछ ।
त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीका निम्न फाइदाहरु रहेका छन् । यसको नियमित सेवन गर्दा मोटोपन घटाउछ । रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । डल्ले खुर्सानिले सवैभन्दा पिसावको विरामीलाई लाभदायक छ । यसले हाडजोर्नी लगाएतका दुखाइका बिरामिलाई पनि निकै फाइदा पुर्याउछ । (gnewsnepal बाट सभार)
चर्चित मोडेल सुरज रावलको 'सुनको महल' बजारमा !!
कोरोना संक्रमित बोक्न अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशी आफै खटिन्छन !!